Somaliya Ma Dacwayn Doontaa Somaliland Oo Ay Uga Baxday Shir Ka Dhacay Koonfur Afrika – hogaanka.org
Muqdisho(HWN):-Dawladda Somalia Oo dibedda Looga Saaray Shir Kaga Dhacayey Koonfurta Afrika Oo ay Buuq ka Sameeyeen, Xilli uu Khudbad jeediyey Wasiirka Maaliyadda ee Somaliland.
Wasiirka Maaliyadda iyo Horumarinta Somaliland Dr.Saad Ali Shire ayaa ku sugan magaalada Johannesburg,isaga oo halkaas kaga qaybgalay shir ganacsi oo ay ka soo qaybgaleen siyaasiyiin u dhashay Koonfur Afrika oo ay ku jiraan Wasiiro iyo wadamo kale.
Kulankan oo socday laba maalmood,ayaa waxa ka qaybgalay siyaasiyiin miisaan culus ku leh koonfurta Afrika oo ay ku jiraan wasiiro.
Dr.Shire oo ka hadlay kulanka ayaa soo bandhigay qadiyadda Somaliland ee ictiraafka iyo xaqiiqda ah in Somaliland ay ilaashatay nabadda, isla markaana hubisay dhamaan sanaadiiqda qaranimo ee dimuqraadiyadda curdinka ah,isla markaana ay dhawaan noqotay mid door weyn ka ciyaaraysa ganacsiga iyo dhaqaalaha qaaradda.
Dr.Shire ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey xidhiidhka ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Somaliland iyo Koonfur Afrika,sidoo kale Dr.Shire ayaa xusay in Abdirihim Abby Farah,oo ahaa muwaadin Somaliland u dhashay,soona qabtay xilka Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay sanadahii 1979-1990 uu ahaa gudoomiyaha gudi gaar ah oo ka soo horjeeday midab kala sooca,isaga oo lagu tiriyo inuu gacan ka gaystay sidii xabsiga looga sii dayn lahaa Nelson Mandela oo xabsiga ku jiray ilaa February 11,1990.
Dr.Shire oo soo qabtay xilal kala duwan ka hor intii aanu hogaanka u qaban Wasaaradda Maaliyadda Somaliland,ayaa waxa uu kulanka kaga hadlay fursadaha iskaashi ee u dhaxeeya Koonfur Afrika iyo Somaliland oo ay ka midyihiin maalgashiga,ganacsiga iyo nabadgalyada.Wasiirka ayaa marar badanbsoo booqday dalka Koonfur Afrika.
Ilowareedyada ka soo baxaya Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka kan ku xiga lagu balansanyahay inuu ka dhaco magaalada Hargeisa bisha December.
Macluumaadka Caalamiga ah ee Somaliland ayaa waxa ay guulo is dabajoog ah ka soo hooyeen xidhiidh laba- geesood ah oo ay la yeesheen Taiwan iyo xafiisyo wakiiladeed laga kala furay Hargeisa iyo Taipei.
Sida laga soo xigtay Randburg Sun oo ah joornaal ka soo baxa Koonfur Africa,dawladda Soomaaliya ayaa ka dhiidhisay shirka,waxana ay bilaabeen in ay buuq ka kiciyaan shirka oo socda,ka hor inta aanay booliiska Johannesburg xoog uga saarin shirka.
Lama hubo hadii dawladda Soomaaliya ay qaadayso talaabo ka dhan ah Koonfur Afrika.
LAMA WAARIYE TAARIIKH BAA KAA HADHAY DR.AADAN ALLAH HA U NAXARIISTO Previous
EU survey confirms citizens’ call for EU to have more powers to tackle pandemic — The European Sting – Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology – europeansting.com Next